Compendium na-ewepụta Email iji zipu | Martech Zone
Tuzdee, Machị 22, 2011 Sọnde, Febụwarị 9, 2014 Douglas Karr
Mgbe m rụrụ ọrụ na Ngwakọta (ụlọ ọrụ m nyeere aka ịmalite ma na-ekere òkè na ya), azụmaahịa na-achọ ọdịnaya oge niile biputere. Azụmaahịa ọ bụla nwere ọtụtụ ọdịnaya… oge ụfọdụ ebe ịchọ ya abụghị ihe doro anya. Otu ebe pụrụ iche m na-atụ aro mgbe niile bụ folda ha zigara.
Ndị ọrụ gị na-aza ọtụtụ ajụjụ maka atụmanya na ndị ahịa niile… ụbọchị niile. Ohere bụ na ọ bụrụ na otu atụmanya ma ọ bụ onye ahịa na-achọ azịza nke ajụjụ a, enwere ike iri, iri puku ma ọ bụ puku kwuru puku ndị ọzọ nọ ebe ahụ na-achọ otu nzaghachi ahụ. Ọ bụrụ na ị na-ewepụta oge iji rụpụta ozi nke ọma site na email… gịnị ma ị zaghachi nzaghachi maka post blọgụ?
Compendium emeela ka echiche ahụ gaa n'ihu, na-enye ndị na-ede blọgụ ohere dee ozi email ma obu zipu otu ozugbo na ikpo okwu ha. Ozugbo ahụ, onye ọrụ nwere ike ịbanye, metụ ya aka, ma ọ bụ nyefee ya ozugbo na onye nchịkwa maka mbipụta. Chris na ndị otu ya na Compendium na-arụ nnukwu ọrụ… na-anọgidesi ike na echiche ọhụrụ Chris banyere ihe Compendium ga-eme… were ọdịnaya site n'ebe ọ bụla ruo ebe ọ bụla.
Aga m akwusi site na Compendium maka ileta ogologo oge echi! Aga m amị amị na ụfọdụ echiche ndị na-asọ maka mgbanwe mbata nke ikpo okwu. Ọ dị mma ịhụ ọkụ n'ime afọ ha!
Chọta ohere akpaaka azụmaahịa